Taariikhda My Butros » Waa maxay sababta aad isku daydo in ay qof oo aan Your Type
Last updated: Sep. 19 2020 | 2 min akhri
Ever lahaa jeer halkaas oo aad saaxiibo ama qoys kuwa, dooneysa inay aad u dhigay ilaa taariikhda la yahay qof ay garanayaan, weydii nooca qofka aad u tagto?
Ku dhawaad ​​qof kasta waa dambi ah u-sheeganaya inay leeyihiin nooc ka mid ah nooca ama khayaarka lammaanaha.
Waxaan maqli dadka la hadlo waxa ku saabsan waqtiga oo dhan: "Waxaan taariikhda dadka nooca-farshaxanka sababtoo ah waxaan ahay artist ah oo keliya" ama "Waxaan jeclahay inaan taariikhda dadka in Wadiiqooyinka Xirfadaha la mid ah sidii aan naftayda."
Laakiin waxa haddii aad iska indha qabsado weyn sababtoo ah ma ku habboon "nooca ugu fiican"?
Tani waxay dhici kartaa cadaalad ah badanaa, gaar ahaan shukaansiga online. Waxaad soo gaarto profile ah in uu ku dhaco cudurkani ishaada, laakiin ka dib markii akhriska stats ay aad si deg deg ah ugu guuraan, waayo ma habboon liiska hubinta saaxiibkiisa fiican. Sidaas nooca waa nin dheer, ragga muruqa ah laakiin uu profile ayaa sheegay in uu 5'6 kaliya "oo dhexdhexaad ah ayaa xiiseyneysa inay jimicsi ama nooca waa timo cad, Dumarka yurubta bari iyo iyada Coleen Rooney oo ah Australian. Ha si toos ah off qoro qof sababtoo ah ma si degdeg ah u muuqdaan in ay ciyaar.
Waa maxay sababta aad dareento in aad u baahan tahay in taariikhdana nooc gaar ah oo qof?
Waa in aad la dhiso xiriir qof ku salaysan danaha mid ah, aaminsan iyo gool. Haddii aad diiradda badan oo ku saabsan sida loo helo qof si haboon tilmaamo gaar ah oo aad rabto in aad raacdo marka shukaansi, waxaad la shirqoolaan yaabaa fursado aad ee la filayo in la dhiso xidhiidh weyn.
Marka aad kaliya ogolaan in taariikhdii nooca, waxaad iska soo noqnoqda, nidaamyada jir. Haddii aad ku taariikhaysan nooca la mid ah qof tobankii sano ee la soo dhaafay oo midkoodna xidhiidhka u diyariyeen, laga yaabee waa in aad looga fikiro oo kaliya si gaar ah shukaansi nooca aad dooratay. Marka aad taariikhda ku nooc la mid ah qof ka badan iyo in ka badan, xiriirka badanaaba waa in uu natiijada dhamaadka isla.
Dating nooc gaar ah waxa ay noqon karaan raaxo leh oo la saadaalin karo. Dating qof nooca ma aha, qof oo kala duwan, aad karta iney u oggolaadaan fursad ay isku dayaan waxyaabo cusub oo ay helaan waayo-aragnimada nolosha cusub. Haddii aad isku daydo shukaansi qof qaba hiwaayadaha kala duwan naftaada ka badan, waxa aad awoodi kartaa in ay isku dayaan dhaqdhaqaaqyo cusub run ahaantii aad ka faa`iideysan. Ka dhaqama kala duwan oo badan kuu gaar ah ay qof u ogolaan kartaa in aad la kulanto cuntooyin cusub iyo dhaqamada.
Si aad u cad, Waxaan ku talinaya ahay waxaad isku dayi shukaansi dad ah oo wadaaga la mid ah oo dheeraad ah qiyamka asaasiga ah gudaha si aad u (sida ku tiirsanaanta, aaminnimadiisa ama deeqsinimada), sida ka soo horjeeda doorashada kuwa kale oo ku salaysan arrimo dibadeed (sida muuqaalka, qowmiyad ama xaaladda bulshada). Waa in aad ku dhegi shariig ku raad ah oo wadaaga qiimaha core la mid ah. Haddii aad rabto in aad u xasil in dhawr sano ka qaba qoys, ma bilaabi shukaansi dadka hami ma inuu ku soo bilowdo qoys. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad hesho qof kale oo aan ku haboonayn waxaa laga yaabaa in nooca aad ugu fiican lammaanaha jir ahaan, laakiinse waxaad la wadaago gool oo aaminsan muddo-dheer, waxaa laga yaabaa in aad siiso fursad.
Ka dib dhan, waxaad kaliya ma ogaan oo kulan aad kaamil ah waxaa laga yaabaa in.
Caddayn Your Taariikhda – Dharka for Success